Mon, Apr 23, 2018 | 17:12:40 NST
नेता जीहरुलेले त मन्त्री पद पाउनुभो । अब देश र नागरिकको लागि कहिलेदेखि काम सुरु गर्ने ? कि मन्त्री परिषद् विस्तार गर्न एक महिना लागे जस्तै काम सुरु गर्न पनि १ महिनानै पर्खिनु पर्ने पो हो कि ?
जब सडक दुर्घटना हुन्छ तब संसदमा खुब चर्काचर्की चल्छ अनि दोस्रो दिनपछि दुर्घटना भएको ठाऊँ नै बिर्सिए झैं गरेर कुरा सेलाउँछ ।
झापाको मेची कलेजमा शिक्षक अभावले,एक महिना अघिबाट कक्षा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । दरबन्दिमा परेका शिक्षकपनि आएका छैनन् । सरकारले किन नपठाइदिएको होला ?
दिनहुँ झै दुर्घटना कहिलेसम्म ? बाटो उस्तै डरलाग्दो, ड्राईभर अपन खलासीको लापरवाही । अनि यातायातको लागि छुट्ट्याएको बजेट काँहा जान्छ कसैलाई थाहा छैन ।
मन्त्रालयले देश र जनताकै लागि काम गर्ने होईनन र ? कि देशमा फेरि मन्त्रालयको पनि आफु अनुकुल नयाँ परिभाषा आयो त ।
नयाँ प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मेरो सुझाव, देवशमशेरले १ सय १४ दिनमा धेरै काम गरेर देखाएका थिए । म सँग ९ महिनामात्र छ भनेर चुपचाप नबस्नुहोला । धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
जे भएपनि अब हाम्रो देश चलाउने त प्रधानमन्त्री नै हुन् । प्रचण्डको नकरात्मक पक्ष देखाएर उनको विरोध मात्र नगरौ, बरु देशको प्रधानमन्त्री हुने मान्छेलाई केही राम्रो काम गरुन भनि कामना गरौ ।
बाढीपहिरो जाँदा होस् या सीमामा एकतर्फी रुपमा बाध बान्दा, सास्ती पाउने त नागरिक नै हुन् । यदी नागरिकको पीडालाई नेताले आफ्नो सोच्ने भए यतिञ्जेल किन चुप ? त्यसैले त भनिएको हो नी उनीहरु राजनीति कुर्सीकै लागि हो भनेर ।
​आर एम जेड पोख्रेल